Ahoana ny famakiana ny tenimiafin'ny Wifi ao anatin'ny 20 segondra | Androidsis
Ahoana ny fomba hamakiana mora foana ny teny miafina Wifi amin'ny SpeedKey ho an'ny Android
Francisco Ruiz | | Fampiharana Android, fiarovana, Tutorials
Tianao esory ny bokotra wifi? Voalohany indrindra dia tsy maintsy ataoko amin'ny fampandrenesana ianao ary mampitandrina anao fa ny fanapahana na fidirana tsy nahazo alàlana amin'ny tamba-jotra tsy misy tariby na karazana tambajotra tsy miankina dia natao ho heloka bevava ary oharina amin'ny fehezan-dalàna famaizana amin'ny firenena maro izay anisan'izany i Espana.
Rehefa avy nilaza an'io aho dia hizara aminareo rehetra fampiharana maimaim-poana mahasoa ho an'ny Android izay hamela antsika triatra Wifi tenimiafina very na hadino momba ny antsika tambazotra finday Fifandraisana Internet Wifi.
Antsoina ny fampiharana SpeedKey Ary izany dia azo alaina maimaim-poana avy amin'ny forum fampandrosoana XDA Developers.
1 Inona no mila apetrako SpeedKey?
2 Ahoana no ampiasako ny SpeedKey?
Inona no mila apetrako SpeedKey?
Hametraka SpeedKey ary esory ny teny miafina Wifi avy amin'ny terminal Android mila fitaovana isika miorim-paka satria ny fangatahana bcmon dia mila alalana avy amin'ny Mpampiasa super miasa tsara.
Ankoatra ny fametrahana SpeedKey mila mametraka a koa isika apk antso fanampiana bcmon, raha vantany vao samy manana isika apk alaina sy apetraka dia afaka manohy ny fampianarana tsotra amin'ny fampiasana ilay rindranasa isika.
Raha hametraka azy ireo dia mivezivezy tsotra izao mankany amin'ny làlan'ny fampidinana miaraka amin'ireo mpikaroka rakitra ary manatanteraka azy ireo amin'ny alàlan'ny fanindriana ny tsirairay apk.
Ahoana no ampiasako ny SpeedKey?
populaire ajaninay ny Wifi ary manatanteraka ny apk ny bcmon, homenay anao alalana superuser, avy eo dia ampodintsika ilay maody "Alefaso ny maody fanaraha-maso", miandry 10 segondra eo isika ary avy eo dia ajanona ilay "Alefaso ny maody fanaraha-maso" ary azontsika atao ny manidy ny fangatahana. Raha manome antsika olana amin'ny fampiharana voalohany dia andramo imbetsaka.
avy eo mampihetsika ny fifandraisana Wifi izahay indray ary manatanteraka izahay SpeedKey, misafidy ny fifandraisana ho voadika ary miandry segondra vitsivitsy vao mifanaraka na tsia.
Ity rindranasa manaitra ity dia afaka mamaha ny teny miafina Wifi very WPA / WPS ny maodely Rindrambaiko mora, ny router no be mpampiasa amin'ny firenena eropeanina, ao anatin'izany i Espana, ohatra, Vodafone ampiasao ireo maodelin'ny router.
Fanamarihana: Averiko aminao ny zava-misy hack ny tambajotra tsy misy tariby Ny tsy miankina dia natao ho heloka ary naseho tamin'ny kaody famaizana Espaniola.
Ity torolàlana na torolalana ity dia miompana tanteraka amin'ny fampiasana manokana ny fangatahana ho an'ny tena tanjona toy ny fanarenana ny tenimiafina hadino o fanamarinana fiarovana amin'ny tamba-jotra misy antsika ary ankehitriny dia zava-dehibe ny fampiasana fanaraha-maso hahitana ny teny miafin'ny WiFi ary hizaha raha toa ka ampy tsara ny tenimiafina nampiasantsika na mila manova azy ho fiarovana iray izay manome fiarovana bebe kokoa isika.
Ampidino - Bcmon.apk, SpeedKey.apk
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » fiarovana » Ahoana ny fomba hamakiana mora foana ny teny miafina Wifi amin'ny SpeedKey ho an'ny Android
Mark Müller dia hoy izy:
Izy io dia miasa ihany ho an'io karazana router na ho an'ny maodely hafa koa?
Tsy mazava raha manokana ho an'ireny mpamily ireny.
Valiny tamin'i Marcos Müller
Raha ny filazan'ireo mpamolavola dia mety ihany io karazana Routers io fa amin'ny fitsapana dia hanaisotra ny fisalasalana ianao
Tsy mandeha amiko ny Bcmon amin'ny Xperia z ... mahazatra ve izany? Misy safidy hafa ve?
Ity rindranasa ity dia tsy manitsaka ny tambajotra, satria hitan'ilay maodelin'ny router fa manome anao pin wps azo atao default izy ao anatin'ilay maodelin'ny router, rehefa mandratra fonosana ny rindrambaiko finday na manafika fanafihana mahery vaika sns ... andao hiresaka momba ny fanapahana
nogarder dia hoy izy:
Ny programa dia mitady ny lakile amin'ny alàlan'ny fidirana lakile sa mijery diksionera fotsiny dia milaza aminao izay heviny?
Nolazaiko izany satria tsy misy ilana ity farany ... efa nanandrana aho.
Ny pc Beini ihany no manao ny voalohany
Mamaly an'i nogarder
Avy eo dia tena voasoratra ilay lahatsoratra, ary indrindra ny lohateny.
Voalaza mazava tsara hoe DECRYPT .... ary tsy izany, fe-potoana.
Jereo fotsiny ireo masontsivana vitsivitsy sy rakibolana.
Srgi dia hoy izy:
Raha te hiasa ny bcmon dia mila fitaovana misy chipset wifi marika Broadcom (bcm4329 na bcm4330) isika. Ny takelaka nexus 7 sy ny galaxy s2 (i9100) ohatra.
Ary manenjika ireo mpandeha amin'ny EasyBox, ny router sasany amin'ny orinasa dia vodafone, ohatra.
Valiny tamin'i Srgi
walterjavier dia hoy izy:
Fa maninona no tsy miasa amin'ny galaxy s3 i bcmon?
Mamaly an'i walterjavier
TinGolon dia hoy izy:
Walter… aza manahy fa tsy mety amiko izany amin'ny S4 i9500. 😀
Mamaly an'i TinGolon
Ahoana ny fomba hanongorako ny razako
erick pincay dia hoy izy:
satria rehefa manokatra bcmon amin'ny root root dia mivoaka
firmware model tsy hita
fitaovana napetraka kinova 0
napetraka fw kinova 0
Mamaly an'i erick pincay
ny fitaovako dia galaxy tab 3
Javier Ruiz dia hoy izy:
Tsy haiko ny misintona ny speedkey rehefa nametraka azy ianao
Valio i javier ruiz
Fampiharana Android mahatalanjona: Fakan-tsary PicPac androany
Ampidino amin'ny Espaniôla an'ny FIFA 14 - Maimaimpoana -